फिल्म समीक्षा: अनमोलका फ्यानलाई रिझाउने ‘कृ’
११ जेठ २०७६, शनिवार | May 25, 2019 | 16:41:31
By radiojanakpur on	 February 9, 2018 देश, मनोरञ्जन
कास्ट- अनमोल केसी, अदीति बुढाथोकी, अनुपबिक्रम शाही
निर्देशक- सुरेन्द्र पौडेल
अन्ततः अनमोल केसीका फ्यानहरुको प्रतिक्षाको घडी सकिएको छ । आज (शुक्रबार)बाट देशभरको स्क्रिनमा अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ चढेको छ ।
केही समयअघि बहुप्रतिक्षित र विवादित हिन्दी फिल्म ‘पद्यावत’ प्रदर्शन हुँदा मल्टिप्लेक्सको फस्ट शो (बिहान ८, ९ बजे)मा दर्शक बाक्लो थिएन । जबकी अनमोलको फिल्ममा बिहानै दर्शकको ताँती लाग्यो । खासगरी किशोरपुस्ताका दर्शकले हल भरिभराउ देखिन्थ्यो ।
फिल्म ‘कृ’ सम्पूर्णरुपमा अनमोल केसीको फिल्म हो, जो यतिबेला नेपाली फिल्मका सबैभन्दा जल्दाबल्दा स्टार मानिन्छन् । उनले अहिलेसम्म चार वटा मात्रै फिल्म खेलेका छन्, ती कुनै पनि फिल्ममा असफलताको मुख हेर्नु परेको छैन । त्यसैले ‘कृ’ नेपाली फिल्मप्रति चासो राख्ने जोकसैका लागि प्रतिक्षित फिल्म बनेको थियो । यसको सफलता-असफलताले नेपाली फिल्मको आगामी दिशालाई प्रभाव पार्न सक्छ ।
युवापुस्ताले साक्षत्कार गरिरहने प्रेमिल कथा हो, कृ । अनमोलको फ्यानका लागि यो कथा आफ्नै जीवन-भोगाइसँग मिलेमा ‘त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।’ किनभने यसका ‘घटना तथा पात्रहरु काल्पनिक’ छन् ।
बि्रटिश गोर्खाबाट पहिलो छुट्टीमा आएका लाहुरे (अनमोल केसी) लाई बिहे गराइदिन चाहन्छिन्, हजुरआमा । त्यसका लागि उनले करिब आधा दर्जन षोडासीलाई घरमै निम्त्यएका छन् । त्यसमध्ये एक जनालाई लाहुरेले छान्नुपर्ने हुन्छ । तर, लाहुरेले ति सबैलाई ‘रिजेक्ट’ गरिदिन्छन् ।
किनभने, गाउँमा सँगै हुर्किएकी आफ्नी बालसखा केशर (अदिती) बुढाथोकीलाई ‘लाहुरेनी’ बनाउने उनको भित्री चाह हुन्छ । बाल्यकालको त्यही चाहले डोहोर्‍याउँदै लाहुरेलाई एउटा पहाडी बस्तीमा पुर्‍याउँछ । संयोगले त्यहाँ उनको भेट तिनै बलसखा केसरसँग हुन्छ ।
अर्को संयोग, उनी तिनै केसरका पिता, जो अवकासप्राप्त लाहुरे हुन्, उनैको सम्पर्कमा पुग्छन् । उनकै पाहुना बन्न पुग्छन् । अब केसर र लाहुरे एउटै छानोमुनी आइपुग्छन् ।
लाहुरे त्यहाँ रहँदासम्म केसरले चिन्दैनन् । प्रेम पनि गर्दिनन् । तर, लाहुरेको मनमा भने केसरप्रति प्रेम पलाइसकेको छ । उनी आफ्नो परिचय लुकाएरै केसरलाई वशमा पार्ने दाउपेचमा लाग्छन् । आखिरमा मौका आउँछ, केसरसामु आफ्नो प्रेम पोख्ने ।
एक गोधुली साँझ लाहुरेले जब केसरलाई आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्छन् तब केशर भन्छे, ‘म अरु कसैसँग प्रेममा छु । तिमीले मबाट जे चाहेका छौ, त्यो पाउने छैनौं ।’ केसरलाई थाहा छैन, आफ्नै सामुन्ने उभिएका लाहुरे उनका बालसखा ‘काजी’ हुन् । किनभने लाहुरेले त्यहाँ रहँदासम्म आफ्नो परिचय लुकाएका हुन्छन् ।
अब लाहुरे आफ्नो घर लाग्छ । जसै ऊ घरतिर लाग्छ, यता केसरले थाहा पाउँछे आफुले पर्खिरहेको काजी तिनै ‘परदेशी लाहुरे’ हुन् ।
त्यसपछि केशरले लाहुरेलाई फर्काउँछे ? उनीहरुको भेट होला ? यस्तै जिज्ञासाले तान्दै फिल्म अघि बढ्छ ।
किन हेर्ने फिल्म ?
करिब दुई बर्षको अन्तरालपछि अनमोल थप माझिएर आएका छन् । शरीर बलिष्ठ देखिएको छ । खासगरी उनको आक्रमक शैली निकै दमदार लाग्छ । लभर ब्वाई भन्दा पनि ‘एक्सन ब्वाई’ को रुपमा अनमोल फिट छन् ।
फिल्मको अर्को आकर्षण अदिती बुढाथोकी हुन्, जसले ग्ल्यामर बजारमा निकै तहल्का पिटिसकेकी छिन् । अदितीले यहि फिल्मबाट डेब्यु गरेकी हुन् ।
किशोर पुस्ताका लागि अनमोल र अदीतिको अनस्क्रिन प्रेमकथा चाखलाग्दो हुनसक्छ । त्यसमाथि भ्यालेनटाइन डेको अवसर जो परेको छ । फिल्ममा मायाप्रेमका नोकझोंक मात्र छैन, धमाकेदार फाइट पनि छ । एक्सन फिल्म रुचाउनेहरुका लागि ‘कृ’ पोषिलो विकल्प हुनसक्छ । फिल्ममा देखाइएको लोकेसन एवं दृश्य लोभलाग्दो छ ।
अर्कोतिर फिल्ममा कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनालले रमाइलो गराउँछन् । फिल्ममा भिलेन बनेका अनुप विक्रम शाहीको अभिनय तारिफयोग्य छ । छोटो भूमिका पाए पनि सुदम सिके खास्सा छन् ।
फिल्मको एउटा सरप्राइज गीत छ, ‘ओरालीमा अघि अघि ।’ फिल्म ‘सम्झना’मा बुवा भुवन केसी र तृप्ती नाडकर नाचेको गीतलाई अनमोलले अलिकति ग्ल्यामराइज्ड गरिदिएका छन् ।
फिल्मको अन्य पक्ष त्यस्तै छ, जो सामान्य नेपाली चलचित्रमा हुने गर्छ । यसमा ध्वनी, खिचाई, सम्बाद सबै समेटिन्छ ।
अनमोललाई विशेष क्याम्पमा राखेर सार्वजनिक गरिएको फिल्म ‘कृ’ निर्देशकीय कोणबाट भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । सम्पादनबाट निर्देशनमा उक्लिएका सुरेन्द्र पौडेल धेरै ठाउँमा चिप्लिएका छन् । उनी फिल्मका निर्देशक मात्र नभएर कथाकार र सम्पादक पनि हुन् ।
फिल्ममा थुप्रै अपरिपक्व र अपत्यारिला दृश्य छन् । साउथ इन्डियन मार्काको ‘नाटकीय’ कथा र दृश्यले अनमोलको ब्रान्डलाई असर पार्ने भय छ ।
एकदमै आधारभूत कुरालाई समेत निर्देशकले बुझ पचाएको भान पर्छ । जस्तो कि, निर्देशकले अनमोललाई लाहुरे देखाउनका लागि लाहुरेकै गेटअपमा घर फर्केको देखाएको छ । लाहुरेहरु घर र्फकदा उनीहरु युनिर्फममै हुन्छन् र ?
लाहुरेको घर र शान-सौकत हेर्दा मनमा प्रश्न उठ्छ, यति खानदानी केटो किन राइफल बोक्न विदेशी भूमिमा भाँसिए ? लाहुरे आउनसाथ हजुरआमाले उनको घरमा एक से एक तरुनीको विस्कुन लगाइदिएको दृष्य अस्वभाविक छ ।
गाउँमा आफ्ना बालसखा प्रेमिका खोज्न हिँडेका लाहुर रोयल इन्फिल्ड (बुलेट)मा हुँइकिदै गाउँ जान्छन् । बाटोमा प्रहरीले लाहुरे जाने गाउँमै कुनै युवतीको ब्याग पुर्‍याइदिन भन्छन् । अपरिचित व्यक्तिलाई व्याग भिराउने कति विश्वासिलो प्रहरी ?
ब्यागको सन्दर्भ त्यसैको लागि जोडिएको हो, जसले केशर र लाहुरेलाई आमने-सामने ल्याउँछ । यति फितलो धरालतमा टेकेर प्रेमकथा बुनिएको छ कि, त्यो पत्यारिलो र स्वभाविक लाग्दैन ।
पटकथा लेखकले बर्तमान समाज, रहनसहन, बोलीचालीलाई नै टिप्न सकेका छैनन् । गाउँको होटलमा सुकिला युनिर्फममै अवकासप्राप्त लाहुरे मातेको दृश्यदेखि लाहुरेको विलक्षण ताकतसम्मलाई विश्वासिलो ढंगले पेश गर्न सकिएको छैन ।
फिल्मको मूल कथा ‘प्रेम’ हो । तर, प्रेमको कथा भन्दा द्वन्द्वका दृश्य बढी रोमाञ्चक छन् ।
अनमोल कति दमदार ?
यो फिल्मका लागि अनमोलले निकै ठूलो मिहनेत गरेको प्रष्ट झल्किन्छ । आफ्ना कट्टर फ्यानहरुलाई अनमोलले निराश बनाएका छैनन् ।
रोमान्टिकदेखि एक्सन अवतारसम्ममा उनी जमेका छन् । पहिले नाच्नै नजान्ने अनमोलले गजबको पार्टी डान्स प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो तर्फबाट उनले कुनै कमजोरी छाडेका छैनन् । यदि यो फिल्मले व्यवसायीक सफलता हासिल गर्‍यो भने त्यसको एक्लो हकदार अनमोल नै हुनेछन् ।
फिल्ममा ‘लजिक’ खोज्नेहरु भन्दा पनि ‘म्याजिक’मा रमाउनेहरुले ‘कृ’ बाट मनोरञ्जन लिनेछन् ।
Quiz of the week On Air